Vaovao vonjimaika momba ny fifidianana – “Nihena ny taham-pahavitrihana tamin’ny fifidianana”, hoy ny Vondrona Eoropeana
Publié décembre 19, 2018 par Book News
Nihena 4% ka hatramin’ny 5% ny taham-pahavitrihana tamin’ny fifidianana raha ny tatitra vonjimaika nataon’ny Vondrona eoropeana, androany maraina.
Nihena ny taham-pahavitrihana tamin’ny fifidianana
Nihena 4% ka hatramin’ny 5% ny taham-pahavitrihana tamin’ny fifidianana, raha ny fanaraha-maso nataon’ny Vondrona eoropeana manerana ny biraom-pifidianana eraky ny Nosy, ny maraina teo. Ny fe-potoana tamin’ny 6 ora ka hatramin’ny 12 ora atoandro teo no voakasik’izany.
Mety ho anton’izany ny fihenan’ny vola nampiasain’ireo kandidà tamin’ny fampielezan-kevitra nandritra ny fihodinana faharoa, araka ny fanazavan’ny Vondrona eoropeana.
Amin’ny ankapobeny anefa, voafehy ny fepetra sy ny fombafomba rehetra mikasika ny fisokafan’ny biraom-pifidianana, izay marihana fa nizotra tsara tao anatin’ny mangarahara sy filaminana, araka ny fanazavan’ny ivotoerana fanaraha-maso Safidy.
“Amin’ny ankapobeny, dia tsy nahitana tranga hery setra. Tsy voasembatsembana ny fahafan’ny delegen’ ny kandidà, ny mpanao gazety ary ny mpanara-maso miditra amin’ny biraom-pifidianana, afa tsy tranga vitsivitsy teo amin’ny renivohi-paritany Atsinanana sy Boeny ary Analamanga”, araka ny fanambarana azo avy amin’ny Safidy.
Nihena ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy, raha ny fanarahamason’ny Vondrona eoropeana.
Nahitana fihatsarana ny mahakasika any fisokafan’ireo biraom-pifidianana, raha oharina tamin’ny fihodinana voalohany ny 7 novambra lasa teo, na dia teo aza ny tsy fahatomombanana samihafa, arak any fanambaran’ny ivontoerana Safidy hatrany.
Maro ireo fanamarihana azo momba ny tsy fisian’ny antsapaka ny mpanao sonia ny biletà tokana, izay mety hisy fiatraikany eo amin’ny fanafoanana ny vato.
Ny vokatra azo voalohany tamin’ny fanokafana ny biraom-pifidianana dia niainga tamin’ny biraom-pifidianana 552 miparitaka amin’ny distrika 34 ao anatin’ny faritra 7 iasan’ny Ivotoerana SAFIDY. Ny Ivotoerana dia miely amin’ny 9350 biraom-pifidianana amin’ny 24 850 ny biraom-pifidianana manerana ny nosy. Mahatratra 7350 ny mpanara-maso mandritra ny androm-pifidianana.
Indreto avy ireo tranga voamarina tamin’izany:
· 88.5% ny biraom-pifidianana dia nahitana ireo mpikambana feno tamin’ny fanombohana, izay nihemotra raha oharina tamin’ny fihodinana voalohany, izay nahatratra 94%].
· 79.5%-n’ny biraom-pifidianana dia nisokatra ara-potoana izany hoe tamin’ny 6 ora maraina, nihatsara raha oharina tamin’ny fihodinana voalohany izay nahatratra . Ny fahatarana dia nifandraika indrindra tamin’ny tsy fahapian’ny fitaovana (38.1%), fahataran’ny mpikambana ao amin’ny biraom-pifidianana (30.2%), fahataran’ny fikarakarana teo amin’ny biraom-pifidianana (28.6%) ary ny faharatsian’ny toetrandro 3.2%.
· Ny fitaovana dia feno ho an’ny 95.8%-n’ny biraom-pifidianana raha 85% tamin’ny fihodinana voalohany.
· Teo amin’ny 5%-n’ny biraom-pifidianana dia tsy natao atsapaka ireo mpanao sonia ny bileta tokana.